Tian'i Shina ny mahita ny TikTok nakatona toy izay ny fivarotana an-tery | Avy amin'ny Linux
Nilaza ny filoha Donald Trump Alakamisy lasa teo fa tsy nikasa ny hanitatra ny fe-potoana farany fivarotana ByteDance izy ny sampana amerikana an'ny TikTok, satria mijanona ho tsy azo antoka ny fizotrany.
Trump dia nilaza hatrany fa ny fe-potoana farany fivarotana ny fangatahana dia ny 15 septambra 2020Na dia tsy izany aza ny daty voalaza ao amin'ny iray amin'ireo baiko mpanatanteraka roa navoakan'ny fitondrany tamin'ny volana Aogositra.
Ny baiko mpanatanteraka voalohany, izay mandrara ny orinasa amerikana tsy hiaraha-miasa amin'ny orinasa sinoa na ireo orinasany, ankoatry ny fametrahana fe-potoana 20 septambra.
Ny faharoa, izay manana fe-potoana farany amin'ny 12 Novambra, dia mitaky Bytedance hivarotra TikTok noho ny antony ara-piarovam-pirenena. Microsoft sy Oracle dia iray amin'ireo mpifaninana amin'ny fananan'ny Etazonia ao amin'ny TikTok. Ny fiasa ao Canada, New Zealand ary Australia dia ao anatin'ny fifanarahana ihany koa.
Tamin'ny 31 Jolay, hoy i Trump mpanao gazety sambany nikasa ny handràra TikTok any Etazonia ao anatin'ny 24 ora izy. Saingy tamin'ny 3 Aogositra, taorian'ny nanambaran'i Microsoft fa tao anaty fifanakalozan-kevitra hividianana fizarana TikTok dia nilaza i Trump fa hanome 45 andro an'i ByteDance hamidy amin'ny mpividy amerikana iray izy.
Ary amin'ny 6 Aogositra, Trump dia namoaka didy mpanatanteraka izay mandrara ny fifampiraharahana amin'ny ByteDance sy ny mpiara-miasa aminy ao anatin'ny 45 andro, ny 20 septambra.
ByteDance sy ireo mety ho mpividy TikTok dia tsy maintsy manatanteraka fifanarahana eken'ny Komity momba ny fampiasam-bola vahiny any Etazonia, vondrona iraisan'ny andrim-panjakana.
Ny fitantanan'i Trump dia tsy maniry ny hitohizan'ny fahalianana amin'ny TikTok ary manantena ny orinasa teknolojia ho mpampiasa vola lehibe indrindra amin'ny fampiharana horonantsary fohy.
Nanatevin-daharana ny antoko ny minisiteran'ny varotra sinoa tamin'ny 28 aogositra niaraka tamin'ny lisitra fanaraha-maso fanondranana teknolojia nohavaozina izay nolazain'ny manam-pahaizana fa ahafahany manara-maso ny fifanakalozana TikTok.
Midika izany fa mety ho ilaina ihany koa ny fankatoavan'i Beijing, izay ahiahin'ny mpanara-baovao maro fa hitranga eo noho eo. Voalazan'ireo lalàna fa afaka maharitra 30 andro ny fahazoana alalana voalohany hanondranana ny teknolojia.
Tamin'ny herinandro lasa teo, rehefa nanontaniana ny mety ho fiantraikan'ny lalàna amin'ny fifanarahana TikTok, dia namaly ny Minisiteran'ny Varotra Shinoa fa tsy natao ho an'ny orinasa manokana ny fanovana ara-dalàna, fa nanamafy ny zon'izy ireo hampihatra ny lalàna.
Na izany aza, Manohitra ny fivarotana an-keriny ny asan'ny TikTok i Beijing any Etazonia avy amin'ny ByteDance tompona sinoa azy ary aleony mahita ny fampiharana horonantsary fohy mihidy any Etazonia, hoy ny olona telo izay nahalala mivantana ny raharaha ny zoma.
Mino ny tompon'andraikitra sinoa fa hisy ny varotra an-tery izany ByteDance ary Toa malemy i China noho ny fanerena avy any Washington, hoy ireo loharanom-baovao, izay nilaza fa tsy fantatra anarana raha fantatra ny zava-misy.
Rehefa nanontaniana momba ny Trump sy TikTok ny zoma ny mpitondra tenin'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny sinoa Zhao Lijian dia nilaza tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety fa nanararaotra ny filaminam-pirenena i Etazonia ary nanentana azy mba hijanona amin'ilay 'fampahoriana ireo orinasa vahiny.
Etsy ankilany, raha tsy mitatra ny teny dia ho voarara ny fifampiraharahana amin'ny TikTok, na dia tsy voalaza mazava aza ny tena toetran'ireo fifanakalozana ireo. Ny didim-panjakana dia mety hahatonga ny fanaovana doka amin'ny sehatra tsy ara-dalàna, ary TikTok dia nanomana mpanao dokam-barotra ho an'izay vokatra izay.
Na izany aza, tsy mazava raha azo raràna ny fifanakalozana sasany izay hisorohana ireo mpampiasa izay efa nisintona TikTok tsy hampiasa azy io, na eo aza ny ohatra ny fandrarana any India, izay nisafidianan'ny TikTok hanidy an-tsitrapo.
TikTok sy ByteDance dia nametraka fitoriana tany amin'ny tribonaly federaly Los Angeles ny 24 aogositra lasa teo nanohitra ny didin'i Trump, ary nilaza azy io ho antony hamelomana ny kabary fanoherana ny sinoa.
Tamin'ny 14 Aogositra, namoaka didim-pitondrana hafa ny governemanta Trump nitaky ny ByteDance hamela ny fahalianany amin'ny fizarana horonantsary ny fampiharana TikTok any Etazonia ao anatin'ny 90 andro.
Ity dia manondro fe-potoana farany amin'ny 12 Novambra. Ny didim-panjakana faharoa dia tsy milaza izay mety hitranga raha tsy manatanteraka ny ByteDance.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Tian'i Shina ny mahita ny TikTok nakatona toy izay ny fivarotana an-tery